Hojii gannaa kanaa keessatti Biiroon Barnoota Oromiyaa daree barnootaa dabalataa 30,000 ijaarsisaa jiraachuu beeksise. Hogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo hojii ganna kana keessa kenninsa tajaajila lammummaan hojjetamaa jiran ilaalchisee har’a miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Hojii gannaa kanaan hojjetamaa jiruun manneen barnoota kuma 10 keessatti dareewwan dabalataa 30,000 ol ijaarsisuufi hojjetamaa jiraachuu Dr Tolaan himaniiru. Gama biraan aadaa dubbisaa hawaasa naannoo keenyaa ol guddisuuf manneen kitaabaa barattootaa 8,000 fi manneen kitaabaa uummataa 6,00 ijaarsisaa jiraachuu ibsameera. Akkuma beekamu bara darbee sababa Covid 19 manneen barnootaa cufamuun barattootni manatti kan galan yoo ta’u bara dhufu tatamsa’inni dhibee kanaa yoo baduullee baate xiqqaatee wayitamootummaan ibsutti manni barnoota banamuu danda’a kan jedhan Hogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr Tolaa Bariisoo, kanaaf kutaan dabalataa barattootni akka walirraa siqanii taa’aniif kan fayyaduudha jedhaniiru. Karaa biraa immoo kutaan dabalamuun istaandardii qulqullina barnootaa mirkaneessuukeessatti gahee olaanaa qabas jedhan. Ijaarsa kanarraatti tola ooltota kan akka maatii,abbootii qabeenyaa, dhaabilee industiriifi namoota dhuunfaan gumaacha taasisaa jiraachuu Dr. Tolaan ibsaniiru akka fakkeenyaatti Shawaa lixaas keessati namni lama mana barnoota lama dhuunfaasaaniin kan ijaarsisan yoota’uu BuleeHoraa,Harargee Bahaa,Magaalaa Galaan,Godina Shawaa Bahaa, Magaalaa Sabbataa,fi kanneen biroo keessatti hojiin tajaajila tolaa daree dabalataarratti hojjetama jira jedhan. Karaa gama biraan aadaa dubbisaa barattottaafi hawaasa naannoo keenyaa guddisuuf mannen kitaabaa barattootaa 8,000 kan uummata 6,00 cimsuuf hojjetamaa jirachuu ibsanii kanaafimmoo kitaabota namoota dhuunfaafi dhaabbilee addaddaa biyya keessafi alaarra waliiti qabuuf waamicha taasisaniiru. Haaluma kanaan Hagayyaa 1-30 bara 2012 tti warren Magaalaa Finfinnee jira Giddugala Aadaa Oromootti kanneen godina,magaalotafi aanaalee Waajjiraalee Barnootaa naannoosaanitti kitaaba kana haard koppiifi soofti koppiin kan waltti qabamuu yoo ta’u kanneen biyya alaa jiran imbasii biyya jiranitti karaa Ministeerra Haajaa Alaafi WMO kan
isaan qaqqabu ta’uu Dr. Tolaan ibsaniiru.